Faransiiska: dab la qabadsiiyay oo ku yaala Cathedral Notre-Dame - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Faransiiska: dab la qabadsiiyay ee Notre-Dame Cathedral
Faransiiska: dab la qabadsiiyay ee Notre-Dame Cathedral
Dabkii wax burburiya Notre-Dame de Paris, Isniintii 15 Abriil, wuxuu ka faafay qiiqa cathedral.
15.04.2019 cusboonaysiinta 21: 21
Dab ayaa bilawday Isniintii wax yar ka hor intaan 19h00 ku taalla qiiqa cathedral. Sida laga soo xigtay farsamada deenishka Paris, dabka ayaa laga yaabaa inuu dhacay meeshii shaqada dib u dhisku ay ku socotay.
Dab ayaa ka kacay dabayaaqadii Isniintii, wax yar ka hor 19h00, at Notre-Dame de Paris. Sida laga soo xigtay sawirada ugu horreeya ee la heli karo, dabku wuxuu ka dhacay qiiqa, saldhigga xakameynaya ee isku dhejinaya xayawaanka cathedral. Waxay ugu dambeyntii burburtay.
Ku soo noqoshada @herpsonc
#our Lady Dhibaatooyinka Pr. Emmanuel Macron #macron20h inuu dib u dhigo hadalka.
Dadka 268 way ka hadlaan arrintan
Twitter Xayeysiiska iyo macluumaadka gaarka ah
Xeelad, dhererka mitirka 93, wuxuu ka kooban yahay 500 tufaax ah iyo 250 tufaax. Waxaa dib loo dhisay Viollet-le-Duc qarnigii 19aad. Waxaa la soo celiyay.
Toddobaadkii hore, lixda ilbiriqsiyo ayaa si cajiib ah loo saaray si loogu kalsoonaado siminaarada iyadoo la isticmaalayo crane weyn.
Dib-u-soo-celinta "taariikhiga ah" ee mashaariicda qadiimiga ah ayaa qayb ka ah mashruuca dayactirka ee Notre-Dame. Mudo toban saacadood ah, saldhigga mitirka 100 ayaa sare u qaaday mid ka mid ah lixda masaafadood oo naxaas ah - laba iyo tobanka Rasuullo ee Ciise iyo afarta calaamadood ee wacdiyayaal - kuwaas oo ku wareegsan isxukunka cathedral. Qiyaas kasta oo 3 ah oo sarreeya oo culeyskiisu ka yar yahay kilo 250. Si ay u fududeeyaan gaadiidkooda, sawirrada ayaa la gooyey oo ay ganaaxday saldhigga saldhigga qoorta.
Sariirta cathedral, sidoo kale, waa la dhimayaa dambas. Nidaamkii geedkii, oo la dhisay qarnigii laba iyo tobnaad, ayaa lagu naaneeso "kaynta" sababtoo ah dad badan oo ka mid ah jaarka oo ka kooban. Geed kasta wuxuu ka yimid geed ka duwan. Cabbirada jirkani wuxuu ahaa mid cajiib ah: dherer dherer ah 100, dhererka 13 ee miyirka, 40 m ee wareegga iyo 10 ee dhererka.
Dhismaha Xarunta Notre-Dame de Paris cathedral waxaa la qarxiyay April 15 by ololaya.
© Notre-Dame ee Paris
Madaxweynihii Faransiiska ee halkaas tagay, ayaa wax yar ka hor mariyay walaaciisa ku saabsan tweet-ka:
Notre-Dame de Paris ee ololaha. Dareenka qaranka oo dhan. Fikradda dhammaan Catholics iyo dhammaan Faransiis. Sida dhamaan dadyowga kale, waxaan caawa ku riixayaa si aan u arko qaybtan annaga oo gubanaya.
Dadka 42.7K waxay ka hadlaan tan
Madaxda kale ee gobolka ayaa sidoo kale muujiyay dareenkooda ku aaddan dabka weyn ee ah kan ugu badan ee lagu booqday ee Yurub. Ku dhowaad 13 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa booqanaya Notre-Dame de Paris sanad walba.